Global Voices teny Malagasy » Miankina amin’ny solosaina enti-tanana lafovidy ny aterineto maimaim-poana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Jolay 2018 3:45 GMT 1	 · Mpanoratra David Sasaki Nandika Liva Andriamanantena
Araka ny nomarihan'i  Rezwan tamin'ny volana Mey 2009, notolorana ny “Vatsy ho an'ny Mpikatroka Iraisam-pirenena” mba hanatrehany ny Fivoriambe BlogHer  tany Chicago i Cristina Quisbert  avy ao amin'ny tetikasa famatsiam-bola Rising Voices Voces Bolivianas . Niaraka tamin'i Cristina i Pilirani Semu-Banda  avy any Malawi, Oluwatoyin Ajao  avy any Nizeria, ary Annie Zaidi  avy any India.
Tao amin'ny bilaoginy amin'ny teny Espaniola dia nanazava  ny antony tsy nahafahany nandefa lahatsoratra betsaka raha mbola tany Chicago i Cristina :
Nampahatsiahy antsika ny lahatsoratr'i Cristina fa tsy mbola manome antoka ny fidirana amin'ny aterineto malalaka ny fidirana amin'ny aterineto maimaim-poana raha tsy mividy solosaina lafovidy. Soa ihany fa milatsaka isam-bolana ny vidin'ilay antsoina hoe netbooks , saingy mbola miankina amin'ny solosain'ny birao, cybercafe, na tranombokim-panjakana ny ankamaroan'ny bilaogera any amin'ny tontolo an-dalam-pandrosoana mba handraisana anjara antserasera.
Noho ny Twitter dia nahafantatra isika fa tonga soa aman-tsara tany Bolivia i Cristina. Nahomby ny fanatrehany ny fivoriana tany amin'ny BlogHer. Araka ny nosoratan'i  Barb avy ao amin'ny The Middle Way  hoe :
Niaiky i Rock and Roll Mama, na dia kivy  aza izy nahita ireo mpandray anjara tamin'ny BlogHer nisafidy fa tsy nanatrika ny fivoriana tamin'ny fametrahana marika, fosafosa ary ny haivarotra. Nanoratra  i Wrong Shoes fa tsy dia nahagaga loatra azy intsony ny fotoam-pivoriana, ary nitaraina ny toa an-dry expateek  fa maro ny mpandray anjara tamin'ny BlogHer no liana kokoa tamin'i Britney Spears.
Ho an'i Cristina kosa dia nanohy ny fanoratany mahavariana izy. Namoaka ny tantara lalindalina kokoa momba ny mahazo ireo mponina indizeny any Bolivia  izy tao amin'ny World Pulse. Indro ny santionany:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/16/122882/
 Fivoriambe BlogHer: http://www.blogher.com/
 tantara lalindalina kokoa momba ny mahazo ireo mponina indizeny any Bolivia: http://worldpulse.com/node/12206